Naghachi iPod Files-iPod Iweghachite
> Resource> iPod> Olee naghachi ehichapụ / Lost faịlụ site iPod
iPod bụ kasị ewu ewu na trendy ngwaọrụ n'etiti music hụrụ n'ihi na ya na mma-ege ntị songs n'ebe ọ bụla na n'ebe nile na ka ume onwe gị. Ọ na-akpa àgwà dị ka ezigbo enyi mgbe ị na njem. Ma mgbe ị na-efu mmasị na oké ọnụ ahịa iPod music faịlụ, vidiyo ma ọ bụ foto? Ozugbo nsogbu itịbe, ihe i kwesịrị ime? E nwere iPod mgbake software iji pụọ niile na-echegbu gị, n'agbanyeghị iPod faịlụ na-ehichapụ, formatted, furu efu ruru iPod media okuku, ngwaike malfunction ma ọ bụ nje agha. Ị nwere ohere na-agbali ize ndụ-free iPod mgbake na-agbake iPod faịlụ na dị nnọọ ole na ole clicks!
Ọnọdụ na-eme ka iPod Data Loss
nhichapụ» iPod Mpịakọta Format 'Unknown'
njehie» Update ma ọ bụ weghachi ime rụrụ iji iTunes software
»na-ezighị ezi njikwa nke
iPod» iPod akọ na-ekwesịghị ịdị ikike
»Tọgharia ma ọ bụ mwepụ nke batrị na-arụpụta furu efu
ọdịnaya» iPod fatory resetting
Gịnị nwere ike iPod mgbake nyere gị aka?
Na iPod mgbake, ị ga-enwe ike naghachi niile data dị na ebe nchekwa ohere nke gị iPod ma ọ bụ a ụda faịlụ, a foto faịlụ ma ọ bụ a video faịlụ.
Wondershare Photo Recovery Maka Windows - Non-ebibi ma na-eme-ya-onwe gị foto mgbake software dị maka Windows Operating Systems naghachi ehichapụ, furu efu, Ị na keerughi photos, videos na music faịlụ site na PC, igwefoto dijitalụ na dijitalụ nchekwa media gụnyere iPod. Ọ bụ dakọtara na Windows 7 / Vista / XP / 2003/2000.
Wondershare Photo Recovery for Mac - Special-e na irè Mac foto mgbake software maka Mac ọrụ naghachi ehichapụ, furu efu, iinaccessible, ehichapụ na formatted ọdịyo faịlụ, vidio, na foto site na Mac kọmputa, igwefoto dijitalụ na dijitalụ nchekwa media gụnyere iPod. Ọ na-akwado Mac OS X 10.5 ma ọ bụ n'elu.
Nzọụkwụ na-agbake iPod Files na iPod Iweghachite Software
1. Download Photo Recovery ma ọ bụ Photo Recovery for Mac na wụnye ya na kọmputa gị.
2. Jikọọ gị iPod gị na kọmputa.
Ọ bụrụ na gị iPod-apụghị gosiri dị ka a mbanye akwụkwọ ozi na kọmputa gị, ị pụrụ ịgbaso n'okpuru nzọụkwụ:
Na iTunes, nri-pịa gị iPod na ị nwere ike họrọ 'iPod Nhọrọ'. N'okpuru 'iPod', ị nwere ike ịzọ a akọrọ na igbe n'ihi na 'Kwado Disk Iji'. Mgbe ahụ, pịa OK. Ị nwere ike ịkwụpụ gị iPod ugbu a, na mgbe ahụ reconnect ya ọzọ.
3. Mwepụta usoro ihe omume. Na ya mmalite interface ị pụrụ ịhụ gị iPod dị ka a mbanye akwụkwọ ozi. Biko họrọ a mbanye akwụkwọ ozi nke ọ na-amalite akpaka Doppler.
4. Preview foto na họrọ a mgbake ohere ịzọpụta natara iPod faịlụ.